Izikhangiso zokuhushulwa izsisu | News24
Izikhangiso zokuhushulwa izsisu
isithombe: nosipho mkhize Owesifazane ofunda isikhangiso zokuhushula isisu kweminye yemigwaqo eseThekwini
Uma uhamba emgigwaqeni yase-Thekwini namaphethelo uyaye hlangabezane nezikhangiso ezingezinhle ezigxotsheni, iningi lazo zibhalwe ngesilungu zithi ‘Cheap Abortion, One Day, No Pain’ lezikhangiso ziheha abesifazane abakhulelwe futhi abangazimisele ngokugcina umntwana ukuba behushule izisu.
Iningi lale mitholampilo ithi lomsebenzi iwenza ngosuku olulodwa futhi ishibhile.
Iningi labesifazane abasebenzisa lendlela yokuhushula isisu engekho emthwethweni bathi, akwenzeki ngendlela abasuke bekhangise ngayo. Okokuqala wukuthi akusiwo umtholampilo osemthethweni, bathi kuba yigumbi nje ndawana thizeni, futhi akusetshenziwa imijovo yokudambisa izinhlungu.
Okunye wukuthi iningi labo linezinkinga esithweni sangasese emva kokuba benze lokhu.
Intatheli ye-FEVER ixhumane nawo lomtholampilo yaxoxisana nowesimame ongathandanga ukuthi kudalulwe igama lakhe othe: “Thina sikwazi ukuhushula izisu zabesimame abangafuni ukugcina umntwana. Lokhu sikwenza ngosuku olulodwa. Umuntu simuphuzisa umuthi othile ozokwazi ukwenza lento ayifuna. Umuntu uyakwazi ukuzikhethela uma efuna ukuphuza umuthi khona emtholampilo noma ekhaya. Siyamululeka umuntu owuphuzela ekhaya ukuthi enze isiqinisekiso sokuthi abe yedwa ekhaya usuku lonke. Kuke kube nzima kithina ukwenza lo msebenzi uma umuntu enezinyanga ezine kodwa sike sibize inani eliphezulu uma efuna sihushule isisu esinezinyanga ezingaphezu kwezine futhi sinodokotela besifazane nabesilisa umuntu uyazikhethela ukuthi ufuna muphi udokotela.”
Owesifazane waseMolweni owahushula isisu kuyo lemitholampilo, ongathandanga kudalulwe igama lakhe uthe uyazisola ngalokhu akwenza ngoba ziningi izinkinga ahlangabezana nazo.
Uthe: “Emva kokuba ngithole ukuthi ngikhulelwe ngaba nokwesaba ngoba ngangisafunda esikoleni. Umuntu owangikhuleliswa wayemdala kunami kodwa sasithandana ngendlela eyisimanga. Okokuqala nje nje ngangiyi ntombi nto ngesikhathi ngihlanga nalo muntu. Emva kokuba ngimtshele ukuthi ngikhulelwe akakhombisanga ukujabula wavele wathi angibone ukuthi ngenze njani ngoba akazimisele ukuba nengane futhi uma lengane ingaba khona izombhidlizela umndeni wakhe.
“Ngahlala phansi ngacabanga, ngingazi ukuthi ngizokwenze njan ngoba ngisafunda futhi ngisaba nokuthi umndeni wami uzongixosha ekhaya. Ngathola inombolo yomtholampilo thizeni ngayishayela le nombolo bathi angilungise imali engango R200 bese ngihlangane nomama ekhoneni lomgwaqo othile eThekwini. Nangempela ngenza njalo, lendawo kwakuyi-flat elingekho esimweni esihle ababuzi lutho ngaphandle kokuthi ufuna ukuwuphezela khona noma ekhaya umuthi. Ngawuphuzela khona ngoba ngisaba ukukwenza ekhaya. Isimo sasisibi, ngayikhipha ingane.”
Uthe oseneminyaka engama-32 uthi usehlezi ephila ngamaphilisi okudambisa izinhlungu esinyeni. “Sengiwumuntu ohlezi ephethwe isinye futhi angisakwazi ukuthola abantwana. Ngiyazisola ngalokhu engakwenza. Ngize ngithi ukube ngaya emtholampilo osemthethweni ngabe anginayo inkinga. Ngiluleka nabanye besimame ukuthi bacabange ngaphambi kokuba bathathe izingqumo ngoba zinomthelela empilweni ngokuhamba kwesikhathi.”
Okhulumela abakwa Marie Stopes, okungumtholampilo wabezifazane uMnuz Andrea Thompson uthe, uthe i-Marie Stopes ihlezi yenza imikhankaso wokululeka abesimame ngokuthi bangahehwa izikhangiso abazibona emigwaqeni. “Lemithola mpilo ayinayo i-address futhi kuhlezi kubhalwe inombolo kamakhalekhukwini okwenza kube sobala ukuthi labantu abekho emthethweni. Indlela le mitholampilo eyenza ngayo umsebenzi kudala izinkinga nezifo ezahlukene kumuntu wesimame. Ngiluleka abesimame ukuthi behambe beyothola izelukeko emitholampilo kahulumeni ngaphambi kokuba beye emtholampilo engekho emthethweni,” kusho uMnuz Thompson.
Mfundi we-FEVER uthini ngalolu daba? Sithumele umyalezo enombolweni ethi:073 154 4117 noma ngekheli le-email elithi: nosipho.mkhize@media24.com